Mifaninana Hahazo Mpandeha Ny Taksy Mavo Ao Amman Rehefa Tonga Ny Uber Sy Ny Careem · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2018 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Ελληνικά, Italiano, عربي, Français, English
Mpamily taksy mandray mpandeha ao Amman, Jordania. Sary avy amin'i Monther Hammad. Nahazoana alàlana.
Ao Amman, renivohitr'i Jordania, manodidina ny 11.400 ny taksy mavo miasa ho an'ny mponina maherin'ny 3,5 tapitrisa. Mampiasa taksy isan'andro ny ankamaroan'ny mponina ao Amman ka mahatonga ny fangatahana maro ho an'ny mpamily fiarakaretsaka izay tsy maharaka intsony ny filan'ny mpanjifa.
Nahitana fanodikodinana [fanamboamboarana] ny fandrefesana ny halaviran-dalana, ny fitenenan-dratsy sy ny teny tsy maontina, ny fandàvana ny toerana haleha sasany ary ny fifohana sigara ao anaty fiara ny fitarainana. Izany no nahatonga ny mponina maro tao Amman faly rehefa tonga tao Amman ny orinasa tsy miankina toy ny Uber sy ny Careem tany amin'ny fiandohan'ny taona 2016.
Hoy i Aseel Odeh, mponina ao Amman tamin'ny Global Voices (GV):
Mipetraka ao Jabal Al-Hussein aho, izay toerana be olona. Niala tamin'ny asako farany aho satria 30 minitra vao tonga any ary tsy misy olona manaiky hitondra ahy hody.
Rehefa manaiky ny hitondra azy any an-tranony izy ireo dia matetika no mitaky saran-dalana mihoa-pampana . Kanefa tsy manan-tsafidy amin'ny fiaram-pitaterana maro i Odeh. Nilaza i Hazem Zureiqat, mpanolo-kevitra momba ny fitaterana, fa bisy lehibe miisa 350 ihany no miasa ao an-drenivohitr'i Amman iray manontolo ary tsy mahafa-po ny rafitra fitateram-bahoaka izay tsy mahazaka afa-tsy 5% amin'ny fitaterana ilaina isan'andro.
Ankoatra izany, lafo tokoa ny vidin'ny solika raha oharina amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, izay mitentina 3.44$ USD isaky ny litatra ao Jordania, raha 0,24 $ USD fotsiny ny litatra amin'izany ao Arabia Saodita .
Nanome antoka ny amin'ny fiarovana sy ny filaminana ny orinasam-pitaterana iombonana tsy miankina
Aleon'ny mponina ao Amman toa an'i Yacoub Lambaz ny orinasa toa an'i Careem sy ny Uber toy izay ny taksy mavo:
Orinasa iray ny Careem , ary miasa manaraka fitsipika sy fepetra ny mpamily tsirairay ary mifanehatra amin'ny orinasa izy ireo raha toa ka mandika ireo fitsipika ireo. Mandry kokoa ny saiko rehefa mahafantatra fa rehefa mandika ny fitsipika tsy azo atao ilay mpamily dia ho hadihadiana izy, ary hahazo fanonerana aho.
Ao Jordania mpandala ny mahazatra ara-kolontsaina, manome toky ireo fianakaviana amin'ny fiarovana bebe kokoa ireo vehivavy ao amin'ny fianakaviana ny fampiasa finday toy ny “araho ny diako”. Amin'ny alalan'ny fiarahan'ny iray amin'ny fianakaviany ihany no hany karazana fitaterana ho an'ny vehivavy mandrapahatongan'ny fampidirana ny fampiasa Uber sy Careem .
Hoy i Aisha Azzam mponina ao Amman tamin'ny GV:
Tsy manana ahiahy aho miaraka amin'ny Careem satria manaja anay ny mpamily ary mahazo aina izahay, ary tsy mitaraina izy ireo raha misy ny fitohanana eny an-dalana.
Hoy i Suzan, manan-janaka dimy:
Karazan'olona miahiahy aho ka dia tsy mandefa ny zanako na aiza na aiza raha tsy izaho mihitsy no mitondra azy ireo any, kanefa rehefa misy ny Careem dia alefako izy ireo na aiza na aiza, rehefa mbola mizara amiko ny làlan-kalehany amin'ny alàlan'ny whatsapp.
Hoy i Heyam, mpankafy Uber:
Azo antoka kokoa ny Uber amin'ny alina.
Nitranga ny fanoherana sy ny ady ara-pitsarana
Nampanantena fa hamorona asa miisa 10.000 ao amin'ny firenena eo anelanelan'ny taona 2016 sy 2018 ny Careem . Na izany aza, hatramin'ny volana Desambra 2017, nandrara ny fiara tsy miankina amin'ny fanomezana tolotra fitaterana ny lalàna Jordaniana, ka nahatonga ny Careem sy ny Uber ho tsy ara-dalàna .
Nanapa-kevitra ny governemanta hampandoa hetra fa tsy handràra ireo tolotra ireo, kanefa nitranga ny olana lehibe kokoa tamin'ny endrika fanoherana goavana avy amin'ireo mpamily taksy mavo izay nitatitra fa matiantoka 80% izy ireo hatramin'ny nahatongavan'ny Uber sy ny Careem.
Nanao fihetsiketsehana tamin'ny endrika hetsi-panoherana samihafa tao anatin'ny roa volana ireo mpamily taksy mavo , ary namerina imbetsaka ny fitarainana tamin'ny governemanta ho tsy nanao hetsika hiarovana azy ireo.
Nanomboka tamin'ny volana Novambra 2016 ny hetsi-panoherana, rehefa nanomboka nahazo laza ny Uber sy ny Careem, nanapa-kevitra ny hivory sy hilaza ny fitarainan'izy ireo ampahibemaso ireo mpamily taksy.
Ho setrin'izany, nampiasa fepetra vaovao ny governemanta toy ny fanidiana ireo fiara Uber sy Careem, ny fampandoavana lamandy ny mpamilin'izy ireo, ny fanafoanana ny fampiasany, ary ny fanolorana ny vondrona iray manontolo tao amin'ny Polisy misahana ny fifamoivoizana mba hihaza azy ireo.
Nisy ihany koa ny hetsi-panoherana nandritra ny taona 2017, ary lasa nanjary fomba iray hanehoana ny tsy fahafaliam-pon'izy ireo momba ny toe-draharaha izany ka nisy mihitsy ny olona sasany no nandrahona ny handoro ny taksin'izy ireo.
Nisy ny hetsi-panoherana natao tamin'ny volana Janoary, Aprily, Jolay, Aogositra, Septambra ary Novambra 2017.
Tsy dia nahafaly loatra ireo mpankafy ny Careem sy ny Uber, izay nahazo fahazarana tamin'ny fiara tsy misy setroka sy azo antoka izany.
Hoy i Farah Mohammed mponina ao Amman tamin'ny GV:
Nivadika ny lohako rehefa nofoanana nandritra ny roa andro ny fampiasa Uber sy Careem. Tsy afaka mandeha na aiza na aiza aho. Misy ny taksy mavo eo akaikin'ny tranoko, kanefa mbola tsy te-handeha amin'izy ireo aho. Ny dadako no nanatitra ahy mandra-piverin'ny fampiasa.
Ny filazana fa tsy ara-dalana ara-teknika ireo fampiasa ireo dia tsy nanakana ny olona tsy haka ny Careem na ny Uber, indrindra amin'ny toetr'andro ratsy.
Nanazava i Lambaz:
Nampiasa ny Careem aho na dia tsy ara-dalàna aza izany, ary indray mandeha, nisy mpamily taksy iray nandaza anay tany amin'ny polisy. Nahavita niala tamin'izany toe-javatra izany izahay sy ilay mpamily. Nomeko kintana 5 izy noho ilay dia!
Nony farany, namela ny Careem hangataka lisansa ny governemanta, saingy miaraka amin'ny fepetra fa mila mampiditra ny taksy mavo ao amin'ny fampiasany izy ireo. Nanaiky ilay fepetra ny Careem satria hanaraka fampiofanana mba hifanaraka amin'ny fenitry ny orinasa ireo mpamily taksy vaovao. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2017 ny dingana fampidirana ho ara-dalàna ary vita tamin'ny volana Desambra 2017.
Nitranga indray ny hetsi-panoherana iray hafa ho valin'ilay fankatoavana.
Mitohy ny fitarainana noho ny fifaninanana tsy ara-drariny
Mbola nihevitra ireo mpamily taksy mavo fa misy ny fifaninanana tsy ara-drariny satria taksy mavo miisa 5000 ihany no neken'ny Careem ho raisina, ary navelany ny sisa.
Hoy i Abu Mahmoud, mpamily taksy 55 taona raha nanazava:
Mpamily taksy aho nandritra ny ankamaroan'ny androm-piainako, ary nanangona tao anatin'ny fanantenana hividy taksy ho ahy manokana indray andro any. Rehefa nandany ny tahiriko manontolo tamin'ny fividianana taksy aho dia tsy nilaina intsony izahay! Tsy afaka miasa aho, satria tsy mampiasa anay taksy mavo intsony ny olona, ary tsy misy olona maniry hividy ilay taksy, satria tsy asa mahaliana intsony izany.
Nimenomenona i Abu Al-Abed, izay niasa toy ny mpamily taksy nandritra ny 13 taona sy i Abu Mahmoud:
Tsy maintsy nandoa 25 Dinars Jordaniana (35 dolara) tamin'ny lehilahy nanofako taksy aho, hatramin'ny farany, tsy maintsy nandoa izany avy amin'ny volako manokana aho matetika, satria tsy mahazo 15 Dinars Jordaniana (21 dolara) akory aho matetika isan'andro.
Tsy nahazo fangorahana firy avy amin'ny Jordaniana maro ny fitarainan'ny mpamily taksy mavo.
Hoy i Mariam, mponina ao Amman:
Matetika mampandoa anay vola lafo ny taksy ho an'ny toerana sasany, manao resaka tsy misy dikany, ary indraindray mametraka fanontaniana tsy ilaina. Tsy hiverina hampiasa azy ireo intsony aho raha vao nanomboka nampiasa ny Uber .
Tsy namoaka fanambarana ofisialy momba ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny Sampan-draharaham-pitaterana sy ny Fikambanan'ny Tompon'ny Taksy, satria mbola miandry ny dika mitovy tamin'ireo fitsipika izy ireo mba hanaovana fanamarihana.
Tena misy ny ady hahazoana mpandeha ho an'ny mpamily taksy mavo. Raha tsy nisy afa-tsy izy ireo no safidy tamin'ny fitateram-bahoaka tsy miankina hatramin'izay dia difotry ny mpifaninana vaovao izy ireo ankehitriny.
Raha niresaka tamin'ny Al Monitor, nanamafy i Zureiqat fa ny tsy fahombiazan'ny governemanta tamin'ny fanomezana rafitra fitateram-bahoaka manara-penitra no olana fototra
Ny antony mahatonga ireo tolotra ireo mahomby eto dia satria tsy vitan'ny governemanta ny nanome rafitra fitateram-bahoaka mendrika.